Caqabado: Isbedelada Cusub ee Suuq-geynta SEO
Ivan Konovalov, oo ah Semt Khabiir, ayaa sheegaya in fulinta AI ay kordhinayso suurtogalnimada helitaanka faa'iido tartan ah, taasina waxay sabab u noqon kartaa raadinta horumarsan oo muuqaal ah, baaritaan deg deg ah iyo codka. Laakiin wali, inta aan helno wargelin ku saabsan faa'iidooyinka AI, u soo bandhigidda ganacsiga tafaariiqeedku waxay noqon kartaa caqabad dhab ah. Marka la eego, Kevin Bobowski, SVP iyo marketer SEO ayaa siinaya faa'iidooyinka AI ee dukaamada. Waxa uu sharaxayaa in isticmaalayaasha badan, boqolkiiba boqolkiiba ilaa 60%, ay bilaabaan raadintooda qalabka mobile. Waxa uu sharaxayaa in aysan jirin dukaanno dijital ah oo aan mashquul ahayn iyagoo raadinaya raadinta telefoonadooda gacanta ama raadinaya mashiinnada raadinta maxalliga ah ee wax ka taraya adeegyada.
Inkastoo xaqiiqda ah in telefoonada gacanta lagu isticmaalo suuq-geynta, cilmi-baarayaasha, nasiib daro, iska indho-tiraan isticmaalka AI iyo raadinta codka. Waqtigan xaadirka ah, suuqyeyaal badan iyo kuwo badan ayaa wajahaya caqabado badan oo ka jira shaqadooda, iyo sidoo kale tartanka tartanka oo kordhay. Warka wanaagsani waa in ay jiraan siyaabo sahlan oo lagu caawiyo xallinta arrintan. Ugu horreyntii, waa inaad fahantaa macaamiisha oo aad doonayso, iyo sidoo kale baahidooda waqtigooda gaarka ah adoo adeegsanaya adeega moobiilka ee mashiinka raadinta .
Sidan oo kale, Kevin Bobowski ayaa sidoo kale aaminsan in isticmaalka raadinta codka ay tahay inuu keeno isbeddello badan oo suuqa xayeysiinta ah iyada oo awood u leh inay caawiso dukaamada iyo sidoo kale matoorada raadinta si ay u helaan faham fiican doorashooyinka macaamiisha kala duwan. Sidoo kale, waxaa jiri doona isbeddelo ku dhaca habka macaamiisha nooca. Tusaale ahaan, halkii ay ku qori lahaayeen "New York Buildings," waxay weydiin lahaayeen "Halkeen ka heli karaa aragtida ugu fiican ee New York?". Tani waa faa'iido aad u weyn oo fursada suuqa u iibiya oo si dhab ah u hagaajin kara ganacsigooda waxayna keenaan lacag aad u tiro badan sanadkiiba.
Si kastaba ha ahaatee, su'aasha aan weli la sheegin waa "Waa maxay saameynta ay ku leedahay hababka SEO?" Haysashada su'aashan maskaxda ku haysa, diiradda ugu weyn ayaa loo rogi doonaa ereyada kale ee dheeraadka ah, taasina waxay ka dhigeysaa istiraatiijiyadda si sahlan oo dhakhso lehna loo hagaajiyo. Dadku waxay isticmaaleen si ay ula xiriiraan qalabka sida Alexa iyo Siri. Waxaadna xusuusataa in isdhexgalkan uu had iyo jeer qaato foomka su'aalaha guud. Ficil ahaan, macnaheedu waa inaad wanaajin kartid boggaaga adoo ku daraya bogga Soodhaweynta ama abuurista blog oo siinaya jawaabaha su'aalaha ugu caansan Source .